महामारीको श्रृङ्खलाः पछिल्लो २ सय वर्षमा कतिको ज्यान गयो ? « Artha Path
महामारीको श्रृङ्खलाः पछिल्लो २ सय वर्षमा कतिको ज्यान गयो ?
काठमाडौं । बुधबार विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसलाई ‘महामारी’ को रुपमा घोषणा गर्यो । झण्डै ४ हजार जनाको मृत्यु भएको र १०० बढी मुलुकलाई प्रभावित गराएको संगठनको घोषणामाथि पनि आलोचना नै नभएको भने होइन । सन २००९ को महामारी घोषणा गर्ने समयदेखि नै आलोचना गर्दै आएका केही समूहले अनावश्यक आतंक सिर्जना गराएको आरोप लगाएको छ । तर संगठनले महामारीको घोषणा गर्दै विश्व समुदायलाई यसमा सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।
फेब्रुअरीको अन्तिम साता विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाका कारण विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरेको थियो । र, कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई ‘महामारी’ भन्ने शब्दले परिभाषित गर्न बारम्बार रोक्दै आएको थियो ।
तर बुधबार स्वास्थ्य संगठनले पत्रकार सम्मेलन गरेर कोरोना भाइरसलाई महामारीको रुपमा परिभाषित र्गयो । संगठनका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अडानोम घबेरियससले १०० भन्दा बढी देशहरूमा फैलिएर एक लाख २० हजारभन्दा बढी मानिसमा संक्रमित भएको यो भाइरसलाई विश्वव्यापी महामारीको रुपमा घोषणा गरेका हुन् ।
महामारी के हो ?
महामारी भन्ने शब्द प्यानडेमिक ग्रीक शब्द प्यान र डेमोसबाट बनेको हो, जसको अर्थ प्यान अर्थात् सबै र व्यक्ति गरी सबै व्यक्तिमा फैलिएको भन्ने अर्थ हुन्छ । यही शब्दबाट आएको महामारीले पनि एकै समयमा धेरै देश र महादेशमा फैलिएको रोग भन्ने अर्थलाई बोकेको हुन्छ । यो शब्द विशेषगरी रोग विशेषज्ञहरूले प्रयोग गर्ने शब्द हो । सामान्यतया रोकिन सक्ने भएसम्म यसलाई महामारीको रुपमा घोषणा नगर्ने भएकोले नै पनि लामो समयसम्म यस्ता रोगहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी घोषणा गर्न इन्कार गर्ने गरेको छ ।
तर, यो शब्दले उब्जाउने डरका बाबजुद पनि ‘महामारी’ शब्दले रोगको फैलावटलाई जनाउँछ न कि यसको रोगको सामथ्र्य वा मृत्युदरलाई । डब्ल्यूएचओको परिभाषाअनुसार महामारी ‘एक नयाँ रोगको प्रकोप हो जुन संसारभरीका व्यक्तिहरुमा सजिलैसँग फैलिन्छ ।’
यसको मतलब यो रोगको प्रकोपलाई महामारीको रूपमा लेबल गरिनेछ, जब यो धेरै व्यापक रूपमा फैलिन्छ । सामान्यतया ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई असर गरेपछि मात्रै यस्तो घोषणा गर्ने गरिन्छ । महामारीको रुपमा घोषणा गर्नको लागि रोग संक्रामक खालको पनि हुनुपर्ने सर्त संगठनको छ । जस्तो कि क्यान्सरले विश्वभरका धेरै मानिसहरूलाई प्रभावमा पारेको हुन्छ । तर यो महामारी बन्न सक्दैन किनकी यो संक्रामक रोग होइन ।
यस अघिसम्म कोरोनालाई स्थानीय स्तरमा मात्रै फैलिएको भन्दै संगठनले महामारीको रुपमा स्वीकारेको थिएन । चीनमा मात्रै धेरै प्रभावित भएको यसको भाइरसले पुरै विश्वलाई प्रभावित गराएपछि संगठनले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
नेपालका जनस्वास्थ्य विज्ञ डा। समीरमणि दीक्षित विश्व स्वास्थ्य संगठनको यो घोषणाले विश्वभरका सरकारलाई आफ्नो पूर्वाधार विकास र सचेतनामा जागरुक हुनको लागि झक्झक्याएको बताउँछन् । यो घोषणासँगै विज्ञटोलीहरुको परिचालन, कर्मचारीहरुको सक्रियता जस्ता जागरुक र सचेत गराउने कामहरु धेरै हुने भएकोले कोरोनाबाट जोगिनको लागि डब्लुएचओले गरेको यो निर्णय अनिवार्य रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘संगठनले धेरै मानिसहरुको ज्यान नगएपनि यसको सम्भावित क्षतिलाई हेरेर यस्तो फैसला गरेको देखिन्छ ।’
महामारीको श्रृङ्खलाः पछिल्लो २०० वर्षमा कतिको ज्यान गयो ?
महामारीको श्रृङ्खलालाई हेर्दा यसको सुरुवात निकै पहिलेदेखि चल्दै आएको पाइन्छ । तल उल्लेख गरिएकाहरु मध्ये केहीलाई विश्वस्वास्थ्य संगठनले महामारीको रुपमा घोषणा नगरेको भएपनि त्यसमा धेरै मानिसहरुले ज्यान गुमाएका छन् । जुन ज्यान जानेको संख्यालाई हेर्दा अहिलेको कोरोनामा ज्यान गुमाउनेको भन्दा निकै धेरै मानिन्छ । पछिल्लो २०० वर्षको महामारीको श्रृङ्खलालाई हेर्दा करोडौं मानिसहरुले ज्यान गुमाएको विजिनेस इन्साइडरले जनाएको छ ।
यो महामारीको सुरुवात भारतबाट भएको थियो । जुन महामारीमा दसौं लाख मानिसहरुले ज्यान गुमाएको बताइएको छ । यो ६ वर्षमा वाषिर्क २१ हजारदेखि १ लाख ४३ हजार जनासम्मको मृत्यु भएको ऐतिहासिक दस्तावेजहरुमा उल्लेख छ ।
स्पेनिस फ्लू, एचवनएनवन (१९१८–१९१९)
सन १९१८ देखि सुरुभएको र एक वर्षसम्म चलेको यो महामारीको क्रममा झण्डै ५० करोड मानिसलाई यसले प्रभावित गराएको थियो । जसमध्ये विश्वभरी ५ करोड मानिसले ज्यान गुमाएका थिए ।
हङकङ फ्लु वा एच३एन२ (१९६८–१९७०)
स्पेनिस फ्लुको संकटको ५० वर्षपछि अर्को भाइरस हङकङ फ्लु सुरु भयो । जसबाट विश्वभरीमा झण्डै १० लाख मानिसको ज्यान गएको बताइएको छ ।
एचआईभी एड्स १९८१(हालसम्म)
पहिलो पटक यसको बारेमा जानकारी प्राप्त भएकोमा यस रोगबाट ३ करोड २० लाख मानिसहरुले ज्यान गुमाएका छन ।
स्वाइन फ्लु एचवान एनवान (२००९–२०१०)
यो रोगबाट एक वर्षमा मात्रै एक लाख ५१ हजार ७ सयदेखि पाँच लाख ७५ हजार ४०० सम्मको ज्यान गएको अनुमान गरिन्छ । यद्यपि यसको स्पष्ट जानकारी आएको छैन ।
पश्चिमी अफ्रिकामा मात्रै यो रोगबाट ११ हजार ३२५ जनाको ज्यान गएको थियो ।
पछिल्लो पटक कहिले गरिएको थियो महामारीको घोषणा ?
महामारीको मापन गर्ने धेरै मापनहरु हुन्छ । यसको कुनै थ्रेस होल्ड छैन । यसमा कुनैपनि मृत्यु वा फैलावटलाई मात्रै आधार मान्ने गरिँदैन । विगतका उदाहरणहरूलाई हेर्दा एचआईभी, स्वाइन फ्लू र सन् १९१८ मा स्पेनिश फ्लू सामेल छन । इतिहासकै सबैभन्दा घातक महामारीको रुपमा रहेको छ ब्ल्याक डेथ । युरोपमा सन् १३४८–५० सम्ममा फैलिएको सो महामारीले २० करोड मान्छे मरेका थिए ।
२० औं शताब्दीमा बिफरबाट मात्रै झण्डै ३ करोड मान्छे मरेका थिए । तर, पछिल्लो समय डब्ल्यूएचओले २००९ मा इन्फ्लूएन्जा प्रकोपको लागि महामारी घोषणा गरेको थियो । त्यस समयमा यस निर्णयलाई केही देशहरूले आलोचना समेत गरेका थिए । त्यतिबेला डब्लुएचओले अनावश्यक त्रास फैलाएको भनेर आरोप लागेको थियो ।
महामारी घोषणाको लागि प्रक्रिया के हो ?
तर २००९ को त्यो महामारीको समय पछि महामारी घोषणाको प्रक्रियामा धेरै परिवर्तन भयो । संगठनले गत जनवरी ३० मा नै पेण्डेमिक भनेको आपतकालीन सार्वजनिक स्वास्थ्य हो भनेर घोषणा गरिसकेको थियो । महामारी भनेको अन्तराष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमहरु अन्तर्गत् एक प्रकारको प्रकोप वर्णन गर्ने उच्च स्तरको वर्गीकरण हो ।
डब्लुएचओका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै द टेलिग्राफले लेखेको छ ‘डब्ल्यूएचओले पुरानो ६ वटा चरणको पद्धतिलाई छाडिसकेको छ, जसको पहिलो चरणमा मानव संक्रमणको कारण जनावरको इन्लुएन्जासम्बन्धी कुनै रिपोर्ट छैन ।’
त्यसैले कोरोनालाई महामारी भन्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने बहस अहिले पनि जारी छ । डब्ल्यूएचओका निर्देशक माइक रायनलाई उद्धृत गर्दै टेलिग्राफले नै लेखेको छ, यसको रोकथाम गर्नका लागि गरिएको आक्रामक र गहन कार्य बाहेक यो घोषणा केही पनि होइन । यसलाई धेरै गम्भीरतासाथ लिइएको छ र हामी यस शब्दको अर्थ बुझ्छौं ।’
महानिर्देशकले धेरै समय बहस गरेर यो शब्दको प्रयोग गरेको उनले बताएका छन् । यो घोषणापछि अरु केही नभएर विश्वभरी नै यसको सचेतना फैलाउनको लागि मात्रै यो शब्दले सहयोग गर्ने बताइएको छ ।अनलाईन खवरबाट
के चिनियाँ कम्पनी कोम्याकले एयरबस र बोइङको बजार खोस्न सक्ला ?
काठमाडौं । १३ वर्षअघि स्थापना भएको चिनियाँ कम्पनी ‘द कमर्शियल एयरक्राफ्ट कर्पोरेशन अफ चाइना (कोम्याक)’
क्यान र माइ सेकेन्ड टिचर को सहकार्यमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको जर्सी डिजाइन गर्नको लागि प्रतिस्पर्धा खुल्ला
कठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ –क्यान) र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रायोजक माई सेकेन्ड